Real Madrid oo kaliya shuruudan ku fasaxeysa difaceeda reer France ee Raphaël Varane – Gool FM
Real Madrid oo kaliya shuruudan ku fasaxeysa difaceeda reer France ee Raphaël Varane
Dajiye June 18, 2018
(Real Madrid) 18 Juunyo 2018. Wargeyska “Diario Gol” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez uu diyar u yahay inuu ka iibiyo difaaca kooxdiisa ee Raphaël Varane dhigooda Manchester United suuqa xagaaga.
Dhawaanahan waxaa jiray warar ku aadan in kooxda Manchester United ay xiiseeneyso lasoo saxiixashada Raphaël Varane, maadaama uu adeegiisa doonayo macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho.
Sida ay wararku xaqiijinayaan Florentino Perez iyo macalinka cusub ee kooxda Real Madrid Julen Lopetegui aysan kahor imaan doonin in Raphaël Varane uu u dhaqaaqo Manchester United, laakiin waa in ay bixiyaan lacago qaali ah ay ku fasixi karaan.
Jose Mourinho ayaa diyaar u ah in uu bixiyo qiimo kasta ay saraakiisha kooxda Real Madrid ku doonyaan inay ku iibiyaan Raphaël Varane si uu qeyb kaga soo dhigto qorshaha kooxdiisa.
Roberto Mancini oo wadada u furay goolhaye Buffon si uu dib ugu soo laabto xulka